Militariga Israel ayaa sheegay in axaddii saddex gantaal oo laga soo tuuray goobo ay maamusho Xamas ay kusoo dhaceen koonfurta Israel, halka laba gantaal oo kale dhexda laga qabtay. Ma jirto cid sheegatay mas’uuliyadda gantaalladaas.
Kadib weerarkaas ayaa ciidamada Israel waxa ay duqeeyeen wax ay ku sheegeen dhisme ay leedahay kooxda Xamas. Lama soo werin wax khasaare ah oo ka dhashay weerarada labada dhinac.
Bayaan kasoo baxay guddiga COGAT oo arrimaha bulshada u qaabilsan militariga Israel, ayaa lagu sheegay “in dhimista shidaalka ee illaa iyo bar ay si weyn u yareyn doonto” wax soo saarka warashada korontada Gaza.
Bayaanka ayaa lagu yiri “kadib gantaalladii lasoo tuuray iyo sii socoshada waxyeeleynta xaaladda amniga iyo xasiloonida, tallaabadan waxay socon doontaa illaa amar dambe.”
Gaza ayaa muddo dhibaato ku qabtay koronto la’aanta iyo korontada oo si joogta ah u tagta.
Mohamed Thabet oo ah afhayeenka shirkadda korontada Gaza ayaa tallaabada Israel ku qeexay “ciqaab wadareed.”
“Horey ayaan dhibaato u qabnay, iminkana go’aanka Israel waxa uu kasii dari doonaa xaaladda. Waxay saameyn xun ku yeelan doontaa nolosha laba milyan oo qof iyo adeegyada muhiimka ah ee isbitaallada” ayuu Thabet u sheegay Reuters.